Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Onye bụbu Pimp na-adọghachi azụ mkpuchi nke ndị na-ere ahịa ọgụ gbasara mmụọ na-akwụ ụmụaka ụgwọ
Na 16, Derek Williams gwara enyi ya nwanyị dị afọ 14 ka ọ hapụ ya ka ọ ree ya iji kwado ọgwụ ọjọọ heroin ya na-eme kwa ụbọchị. Uru na-enye nnukwu ego webatara ya n'ime afọ 32 dị ka onye na-azụ ahịa ọrụ, na-ere ihe karịrị ụmụ nwanyị 150 na ndị nọ n'afọ iri na ụma na steeti 50 niile, Canada, na Europe.
Derek etobeghị na nrọ nke ịghọ nwatakịrị na-azụ ahịa mmekọahụ. Ọ chọrọ ịbụ onye ọka iwu. Otú ọ dị, mmegbu, nleghara anya, na nhụjuanya ndị ọzọ mere ka nrọ ya ghọọ nrọ nke enweghị olileanya. Ọtụtụ nde ụmụaka America nọ n'otu enweghị olileanya ahụ taa, na-eme ka ha nwee ike ịghọ ndị ihe metụtara ndị dị ka Derek bụ ma ọ bụ ịghọ onye ọ bụ.
Egwuregwu Uche: Ịghọta ọgụ gbasara mmụọ nke ndị na-ere ahịa na-ejikọta akụkọ Derek na nyocha dabere na ihe akaebe, ngwaọrụ bara uru, na nghọta onwe onye sitere n'aka onye na-ede akwụkwọ na onye mgbasa ozi na-enweta ihe nrite mba ụwa Dr. Deena Graves. Ọ na-agbakwụnye nghọta dị mkpa sitere na afọ 13 nke ahụmịhe onye ihe metụtara na ọzụzụ ndị ọzọ iji gbochie na gwọọ ndị ihe metụtara.
Ruo ogologo oge, mmerụ ahụ na ndị na-azụ ahịa na ụmụ anyị na-emekọ ihe: Nnyocha ndị dabeere na ihe àmà achọpụtawo n'ụzọ dị ukwuu na anyị adịghị echebe ha pụọ ​​n'aka ndị na-azụ ahịa nakwa na ndị na-eme ihe na-enweta ọgwụgwọ na-ezughị ezu maka nhụjuanya pụrụ iche, mgbagwoju anya. N’ihi ya, nnyocha e mere na-egosi na ihe dị ka pasent 50 na-agbalị ịgbanahụ igbu onwe; ha nwere ọnụ ọgụgụ ọnwụ dị elu pasentị 40 karịa nkezi mba.
Akụkọ ndụ a dị egwu na-achọ ịgbanwe nke ahụ. Ọ bụ oge karịa ka ọ dị mgbe ọ bụla, na ihe ịchọ mma n'ịntanetị nke ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-arị elu pasent 97.5 site na 2019 ruo 2020. Ọrịa ịda mbà n'obi, nchekasị, egwu na owu ọmụma na-akawanye njọ site na ọrịa na-eme ka ụmụ anyị nwee ike ịnweta ndị na-ere ahịa ahịa karịa mgbe ọ bụla.
Egwuregwu Mind na-ewepụ ike ha n'aka ma tinye ya na nke gị. Ọ bụ ohere dị n'ụdị maka ndị ọkachamara, ndị na-aza ajụjụ mbụ, na ndị nne na nna / ndị nne na nna ka ha ghọta ụlọ ọrụ na-emebi ihe site n'ime. Isiakwụkwọ nke ọ bụla na-eme njikọ dị mkpa n'etiti ihe ndị mere na ndụ Derek na ihe nwere ike butere nsonaazụ dị iche iche.
Derek enweghị ihe ngọpụ maka ihe o mere. Ọ na-akọwa n'ụzọ doro anya akụkọ ya iji nyere ndị mmadụ aka ịghọta ka ndị na-ere ahịa na-esi enweta mmerụ ahụ nwata na adịghị ike ndị ọzọ iji rata ndị ọnyà n'ọnyà ha.
"Site n'iwepụ akụkọ m, enwere m olileanya ịnye gị usoro iji luso enweghị olileanya na-ejide ụmụaka, na-eme ka ha dị mfe anụ anụ maka anụ anụ nwere nkà ma ọ bụ onye na-emepụta anụ ọhịa na-eme ka m dị. Ọ bụ ezie na enweghị m ike ịkwụ ụgwọ maka ndụ nile m bibiri, ọ na-agụsi m agụụ ike igbochi mbibi nke ọtụtụ ụmụ anyị.”
Denise Williams, onye Derek nwere ogologo oge na ala, dere okwu mmalite ma dị na ndị edemede abụọ ahụ maka ajụjụ ọnụ. Denise ghọrọ onye a tara ahụhụ na 11 wee gbakwụnye na omimi nke nghọta banyere ka mmerụ ahụ nwata si aghọ ebe ịchụ nta ndị na-ere ahịa. Ọ mepụtara mmemme Nhọrọ Ndụ M nke obodo a ma ama wee kpughee ụzọ ndị a na-ere ahịa na-ebute na ala, onye na-ewe ọrụ, ma ọ bụ onye na-azụ ahịa.
Kwa afọ na United States, ụmụaka na-ata ahụhụ ihe karịrị nde 246 ndị a ma ama, gụnyere ịzụ ahịa, mmegbu mmekọahụ, ịgbanahụ mmegbu n'ụlọ ha, na agụụ. Akwụkwọ a na-agbagharị agbagharị na-atụgharị echiche ndị na-edoghị anya, okwu mkparị, na nyocha ka ọ bụrụ agụụ na-akpali akpali.
Ụzọ ọhụrụ maka ịlele omume mmegharị n'ime ụmụaka nwere Autism